Casual, leh jiinis iyo kabo | Bezzia
Maria vazquez | 13/09/2021 18:00 | Maxaan xirtaa
Dayrtu waa soo dhowdahay laakiin weli waxaa jira maalmo badan, haddii aan xagaa ahayn, oo leh heerkul wanaagsan oo weli ay tahay inaan ku raaxaysanno. Waan sii wadan karnaa xirista dharkayaga dharka xagaaga ee aad jeceshahay oo iyaga ka abuuro dhar sidan oo kale leh jiinis iyo kabo aan maanta soo jeedinno.
Wali waa xilli hore in loo laabto heerka labaad kabaha kabaha iyo taangiyada dushooda, Xataa waqooyi! Waxay u badan tahay in waqtiyada qaarkood aynaan xiran doonin shaar gacmo dheere ah oo fudud, laakiin ma eryi doonno dusha taangiyada sida ugu dhaqsaha badan markaan dul saarno dusha sare iyo jaakadahaan si aan ula macaamilno saacadaha qabow ee maalinta.
2 Kabaha kabaha
3 Dharka sare
Jeansku waa dhar aan waqti lahayn; afarta xilli ee sannadka ayaa nala socda. Mid kasta oo inaga mid ah wuxuu leeyahay kuwa aan ugu cadcad kuwaasna waa kuwa aan u adeegsan doonno inaan ku abuurno dhar aan caadi ahayn oo leh jiinis iyo kabo si aan ugu raaxeysto nolol maalmeedka xilligan oo kale. Inkasta oo ay tahay in wax walba la sheego, wax walba waxay tilmaamayaan in dayrtaan ay noqon doonto naqshadaha tooska ah ee qaadi doona heerka dhexe.
Maxaad samayn doontaa maalintii? Haddii aad u guureyso halkaan oo aad u guurto waxaa laga yaabaa inaad doorbido sharadka kabaha siman. Sanadkan kabaha nooca majarafadaha ayaa door hoggaamineed lahaa, in kasta oo aanan dhammaanteen la qabsan inaan la soconno. Haddii aad ka tirsan tahay kooxdan u dambaysa, waxaa laga yaabaa inaad doorbiddo inaad sharad ku gasho kabo leh xargo dhuuban oo ku dhegan canqowga oo leh cidhib hoose ama dhexdhexaad ah.
Waxaan haynaa fursado badan si aan u dhammaystirno qaabayntayada. Funaanadaha aasaasiga ah iyo funaanadaha dhididka Waxay noqon doonaan xulafada ugu fiican si ay u abuuraan dhar aan caadi ahayn oo raaxadu ku jirto. Haa, sidoo kale shaararka aan ciriiriga lahayn, in kasta oo lagu daro kuwaan iyo aaladaha ku habboon waxaad ku guuleysan kartaa toban qaab si aad u baxdo galab ama habeen sida Sheryl sameeyo.
Dalaggu wuxuu ugu sarreeyaa xargo leh faahfaahinta ruffle iyo blouses gacmaha puff cad Waxay ku habboon yihiin inay gaaraan muuqaal jaceyl badan. In kasta oo haddii aad sharad ku gasho shaar cad iyo roob -roobaad waxaad heli kartaa muuqaal dhex -dhexaad ah, xikmad badan oo rasmi ah. Haa, blouses iyo funaanado leh daabacaad ubax midab leh ayaa iyaduna ah ikhtiyaar, calaamad u ah iska -caabbinta dayrta ee iman doonta.
Miyaad jeceshahay noocyadan dharka leh jiinis iyo kabo? Maxaad ugu jeceshahay?
Sawirro - @abdihakin_abdi, @abdihakin_abdi, @tineandreaa, @abdisalaam, @bartabacmode, @ cindy.octaviany, @karinemilyblog, @ frenchstyle.agi, @walkinwonderland
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Casual, leh jiinis iyo kabo